သက်တန့်ချို: အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် အငယ်ဆုံးမိခင်
ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံမှ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ သမီးတစ်ယောက် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ် ။ သူမဟာ လက် ထပ်ပွဲ ဒုတိယ ရက်မှာ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံကို သွားရောက်ပြီး မွေးဖွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် ဒီဘယ်လ်ဂျီယမ်သူဟာ ကစားကွင်းမှာ တခြားသူတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျတာ ခံနေရ တုန်း အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအမျိုးသားကတော့ ဒီကောင် မလေးကို စစတွေ့ခြင်း အသက် ၁၅ နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်လို့ ၀န်ခံခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ ချိန်းတွေ့ပြီး တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာ ဒီမိန်းကလေးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာခဲ့တယ် ။
သူမမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့အခါ သူဟာ ဒါ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ပဲ ဆိုပြီး ကောင် မလေး ကို လက်ထပ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လည်း ဒီအမျိုးသားဟာ အရွယ်မရောက်သေးသူနဲ့ ကာမ ဆက် ဆံခဲ့တဲ့အတွက် ထောင် ၆ နှစ် ထိ ကျခဲ့ရမယ့် အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် ။
ဒီ ၁၁ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကတော့ ကျောင်းမတက်ချင်တော့ပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူမဟာ အခု မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် ။ သူမနောက်ဆုံးပြောခဲ့တာကတော့ “ ကျွန်မ အရုပ်တွေနဲ့ နောက်ထပ် မကစားချင်တော့ပါဘူး ကျွန်မမှာ အရုပ်သစ်တစ်ရုပ် ရနေပြီလေ ” တဲ့ ။ အော် လော ကကြီးလည်း ဘာတွေဖြစ်နေပါလိမ့် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 10:21 AM
Labels: ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ, ဆေးပညာဖြစ်ရပ်ဆန်းများ
Myanmar Online Music January 28, 2012 at 10:34 AM
phyusinthant January 28, 2012 at 3:19 PM
တာဝန်ယူရဲတဲ့သူ.အတွက်အရမ်းကိုလေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ကြိမ်လောကကြီးမှာဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ.လို. “ဖြူစင်သန်.” ဆုတောင်းပေးပါတယ်။လူသားအယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
သိင်္ဂါကျော် January 28, 2012 at 6:51 PM
ခေတ်ပျက်ကြီး ဖြစ်နေပြီ ထင်ပါရဲ့..။
ကောင်လေးကလည်း ၁၉ နှစ်လို့ မထင်ရ.. ကောင်မလေးကလည်း ၁၁ နှစ်လို့ မထင်ရဘူးနော်.. ပိုကြီးနေပုံပေါက်တယ်..
အဖြူရောင်နတ်သမီး January 29, 2012 at 7:39 PM
သူ့ကိုကြည့်ရတာ ၁၈/ ၂၀ လောက်ကိုထင်ရတယ်နော်..။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာသဘာဝပါပဲ၊ သူတို့က တစ်ကယ်ချစ်လို့ တစ်ကယ်ထပ်ထပ်ယူကြတာပဲ။
U Swam Myint January 20, 2013 at 11:54 PM
What happened to the world????????
suenge January 30, 2013 at 10:52 AM
puti.167 February 26, 2013 at 10:24 AM
Anonymous March 8, 2013 at 12:14 PM
everybody has their desire.The condition that person warmly wanna it,it must be right for these person.So i don't have to tell human beings.
သူဘဝနဲု့သူ ကျေနပ် ရင်ပြီးတာပဲ
တ ပါတ် တွေ့ ရုံ နဲ့ ကိုယ် ဝန် ရှိ တယ် လား
တ ပတ် တဲ့ လား
လုပ် ချင် ရာ သာ လုပ် ကြ ပေ တော့ ဗျို့..............
လွှမ်းမိုးသု April 19, 2013 at 8:16 AM
kyaw kyaw May 2, 2013 at 11:38 PM
တက်လူ May 7, 2013 at 10:54 PM
ဒန့် ကျွဲပင် သားလွဲတဲ့ခေတ် ဆုတ်ကဒ် ခေတ်ကိုဦးတည်နေပါပြီလို့ပြောချင် ပါတယ်
aungboboheinawyawthar May 11, 2013 at 8:08 PM
comond ပေးစေချင်လို့တင်ထားတာ ကိုယ် တို့က မမှားရအောင် ဂရုစိုက်ရမှာပေါ့။
Anonymous May 29, 2013 at 5:13 PM
အင်းဖြစ်နိုင် ပါတယ် ရာသီစောလာတဲ့မိန်း က လေးဆိုရင်
ဒီလိုမျိုးတွေ နောက်တခါမဖြစ်ပါစေနဲ့လိုပဲ ဆုတောင်းရမှာပေါ့
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ၁၁နှစ်ကလဲရုပ်ကြီးကရင့်လှပြီ မရုံပါဘူး။
Htun Htun January 5, 2015 at 7:57 PM
က လေး ကတော့အကြီး ကြီးပါ